नेपालमा कोरोना खोप १ करोड डोजभन्दा बढी लगाईयो « dainiki
१८ भाद्र २०७८, शुक्रबार १३:२६
१७ भदौ, काठमाडाैँ । नेपालमा हालसम्म १ करोड ३३ लाख कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप भित्रिएकोमा भदौ १६ गते वुधबार सम्म १ करोड डोजभन्दा बढी खोप लगाइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा समिर कुमार अधिकारीले १ करोड भन्दा बढि खोप यति कम समयमा लगाईनु निकै सकारात्मक कुरा भएको भन्दै सरकारले लक्ष्य गरे अनुरुपको खोप उपलब्ध गराई सबै मानिसमा पुर्ण खोप लगाउन प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।
नेपालमा खोप लगाउन लक्ष्य राखिएको २ करोड १७ लाख ५६ हजार सात सय त्रिसट्ठी जना मध्ये बुधवार सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ५४ लाख २४ हजार ८ सय ३६ जना अर्थात् १७.९ प्रतिशत ले खोपको पहिलो मात्रा लगाइसकेका छन् । खोपको पुर्ण मात्रा लगाउनेको संख्या ४६ लाख ६७ हजार ३ सय २८ अर्थात १५.४ प्रतिशत रहेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का दक्षिण पुर्वी एसिया क्षेत्रीय निर्देशक डा पूनम क्षेत्रपाल सिंहले यति छोटो समयमा १ करोड भन्दा बढि खोप लगाई १५ प्रतिशत जनातालाई पुर्ण खोप लगाउन सफल भएको भनि ‘नेपाल’लाई बधाई दिनुभएको छ ।
नेपालमा गत वर्षको माघ १४ गतेदेखि कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको थियो । नेपालमा अहिले भारतमा निर्मित कोभिसिल्ड, चीनको भेरोसेल, अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सन, जापानमा बनेको एस्ट्राजेनेका र स्विडेनमा बनेको एस्ट्राजेनका खोप लगाइएको छ ।
प्रकाशित मिति: १८ भाद्र २०७८, शुक्रबार १३:२६
६ कात्तिक, काठमाडाैँ । अमेरिकाको फाइजर–बायोएनटेक कम्पनीद्वारा उत्पादित कोभिड–१९ विरुद्धको फाइजर खोप ५ देखि ११ वर्षसम्मका
बिर्सने वा बारम्बार गल्ती गर्ने बानी छ ? चिन्ता नलिनुस्, यसो गरे तपाईंमा सुधार आउँछ
५ कात्तिक, काठमाडाैँ । कतै तपाईंको हतारमा बिर्सने वा बारम्बार गल्ती गर्ने बानी त छैन! आत्तिनुपर्दैन।
३१ असोज , बैतडी । बैतडीमा सरकारी कार्यालयका भवन संरचनाहरू अपांगमैत्रL नहुदाँ अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई
डेंगु नियन्त्रण गर्न फगिङ अभियान
३१ असोज , उदयपुर । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले डेंगु नियन्त्रणका लागि फगिङ अभियान थालेको छ